SCIENCE TO SOCIETY: तिहार आयो
खास गरी दिदिबहिनी र दाइभाई बिचको सुमधुर सम्बन्ध राख्ने अनी भेट-घाट गर्ने माध्यम हो यो चाड। दिदी बहिनीले एककिसिमले पूजा गर्छन् दाई भाईलाई। तोरिको तेल, निधारमा सप्तरङी टिका अनि मखमली फुलको माला लगाइदिने मलाई बिशेष लाग्छ। अनि स्वभाबिक रुपमा बिभिन्न किसिमका रोटीहरु जस्तै सेल, अनरसा, फिनी, सिन्कामरी (ठाउ अनुसार नाम फरक हुन सक्छ)। हाम्रो घरमा फुपु आउनु हुन्छ तिहारमा। अनि उहाले बनाएको परीकारहरुको त के बयान गराइ भयो र। खास गरी खसीको मासुको कवाब। मुखै रसाउने टाईप गर्दा पनि। भाई टिका भन्दा अघि काग पूजा बाट सुरु हुन्छ तिहार। टपरीमा भात राखेर बाहिर लगि राख्दिने अनि कागहरु आएर खान्छन। अनि कुकुर तिहार। हाम्रो घरमा कुकुर त छैन। तर पनि छिमेकी को कुकुर वा गल्लीको कुनै कुकुरलाई भए पनि माला लगाईदियो, खान दियो। यसो गर्न मेरी बहिनीलाई साह्रै मन पर्छ। हामीले त घरमा भएको बिरालोलाई पनि टिका, माला लगाइदिन्थीम। गाई तिहारमा गाई पूजा गर्ने हो नि। खासमा हामीले भैंषी, पाडा पाडी लाई तेल, रङ र माला लगाइदिने गरिन्थ्यो। हाम्रो घरमा गाई थिएन। एक किसिमले जुन जनावरले हामीलाई सहयोग गर्छ त्यसैलाई हामीले पनि महत्व दिनु पर्छ भन्ने मान्यता होला भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ।
तिहारको महत्वपूर्ण अर्को पाटो भनेको देउसी भैलो हो। यो पनि ठाउँ अनुसार फरक फरक भएको अनुभव छ मेरो। मध्यपश्चिम तिर केटाहरुले भैलो खेल्छन र केटीहरुले देउसी खेल्छन। उता पूर्व तिर र काठमाडौं तिर ठीक उल्टो। केटाहरुले देउसी खेल्छन अनी केटीहरुले भैलो खेल्छन। माओबादी युद्ध सुरुहुन भन्दा पहिले एक किसिमको रौनक हुन्थ्यो भैलो (केटाहरुले खेल्ने)को। तिहार बाट सुरु भएको भैलो पछि मङ्सीर पुस तिर गाउ तिर पूजा लाउदा पनि भैलो बोलाउने चलन थियो। मादले, मारुने, पुर्सुङेहरुको बेग्लाई ड्रेस हुने। दिउस् भन्दा राति खेलिएको भैलो राम्रो लाग्थ्यो। मध्यरातमा सुतिरहेका हामी मादलको आवाजले बिउजीन्थिम। बाटोमा हिद्दा बज्ने मादल् र बसुरिको ताल र भईलो खेल्दा बज्ने ताल बेग्ला बेग्लैइ। मादलाको ताल सुनेर थाहा हुन्थ्यो कि भैलो टोली बाटोमा आउदैछ् कि खेल्न सुरुगरिसक्यो। मलाई भैलोमा बज्ने तालहरुको बारेमा ग्यान थियन तेती बेला। पछि त तेस्ता धुनहरु सुन्न पाइयन। गाउ-गाउका आ-आफ्नै भैलो समुह हुन्थे अनि बेला मौकामा तिनको बिचमा प्रतिस्प्रधा हुन्थ्यो। जस्ले राम्रो भैलो प्रस्तुत गर्थ्यो उस्ले धेरै पैसा पाउथ्यो। भैलो र देउसीमा गाउने गीतहरु धार्मिक किम्बदन्ती, भगवान सम्बन्धी हुन्थे। जसले मेरो खासै ध्यान तान्थेनन्। मैले मतलब पनि गर्थिन। खासमा मन पर्ने भनेको धुन र ताल नै हो। पछि केहि समुहले गीत परिमार्जन गरेर सम-सामयिक बनाएका थिय। त्यसले धेरै मान्छेको ध्यान तान्थ्यो। खास गरि युवा पुस्ताको। माओबादी युध्ध चर्किदै जादा यस्ता भैलोहरु लोप हुदै गए। र नया पुस्ताले क्यासेटमा हिन्दी गीत घन्काउदै डिस्को डान्स गरेर भैलो खेल्न सुरु गरे। अबको नया नेपालमा गाउने गीत परिमार्जन गरि-आफ्नो दुख:सुखका गाउने तर पुरानै लय र तालमा। यस्तो गर्न पाएदेखी सन्स्क्रिति पनि जोगिन्थ्यो र मनोरन्जनको माध्यम पनि हुन्थ्यो। मेरो मस्तिश्कमा यौटा योजना थियो र अहिले पनि छ। नया पुस्तालाई पुरानो भैलोको तालीम दिएर प्रत्यक तीहारमा भैलो प्रदशन गर्ने। होइन भने नया पुस्ताले यो बिर्सिने छन।
कलमबीर_घोताने October 27, 2008 at 9:43 PM
दिपावाली, दिवाली त मलाई हिन्दी शब्द हो जस्तो लाग्छ, बलिउडले गर्दा होला आजभोलि सबैजना त्यही भन्ने। मलाई त तिहार नै भन्न सजिलो लाग्छ। के गर्नु पहिले जस्तो आजभोलि तिहारमा त्यस्तो रमझम र रमाइलो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्द्छ। फेरि म पनि विदेशिएकोले होला यादमा मात्र अतीतको रमाइलो छ घरतिर कस्तो होला नँया नेपालको परिवेशमा कल्पनानै गर्न सक्दिन। जेहोस् तपाईलाई पनि तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
Homnath October 29, 2008 at 8:43 AM
OOps!!! Basanta brother, reading this blog, i remember that days of my highschoollife from my remote village. Really we, especially in aboard, missing tihar. Wishing that days agian, while we r playing with Deushi n Bhailo with all frens in the same villages, oops remembering that days agian, happy tihar to all.
BasantG January 24, 2009 at 6:00 AM
Anonymous October 13, 2009 at 5:08 AM
Balyakal ko yad ayo ho sir
krishna thapa October 19, 2009 at 1:10 PM
बाट को ताल त एस्तो हुन्छ।। तिरी ति ति !! तिर तिर तिर। म त मादलए परे। हम्ले त रक्सी खन्थिम। अनी झुम्मा परेसी मादल भिरो। मस्त ले हनो मादल। तेती बेला थाहा नै नपाईनी। अर्का दिन बिहान उथदा त हात सुन्निएर कस्तो हुनी। फेरी अर्क दिन अलिकती खाएसी ठीक हुन्थो।
Kalu dada October 19, 2009 at 1:56 PM
एती किन रक्सी खान्छस? ख मुजी मजा हुन्छ के।
Sangita November 4, 2010 at 12:29 PM
Simple and sweet explanation of our festival. I enjoyed reading your post. Great work, keep going.Happy Tihar to you too- Sangita